Niger oo lagu xasuuqay dad ka badan 79 qof | Berberanews.com
Home WARARKA Niger oo lagu xasuuqay dad ka badan 79 qof
Niger oo lagu xasuuqay dad ka badan 79 qof
Niger-(Berberanews)-Kooxo hubeysan oo looga shakisan yahay inay yihiin mintidiin Islaami ah ayaa weerartay laba tuulo oo ka tirsan dalka Niger, halkaasi oo ay ku dileen ilaa 79 qof, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee Reuters.
Qiyaastii 49 qof ayaa lagu dilay halka 17 kalena lagu dhaawacay tuulada Tchombangou, halka 30 kalena ay ku dhinteen tuulada kale ee Zaroumdareye. Labadani tuulo ayaa ku dhow xadka dalka Niger uu la wadaagto Mali.
Rabshado ayaa in dhawaale ka dhacayay gobolka Saaxil ee qaaradda Afrika, kuwaasi oo ay geysteen kooxo mintidiin ah.
Dowladda Faransiiska ayaa shalay sheegtay in laba ka mid ah askartooda lagu dilay dalka Mali.
Saacado ka hor, koox xiriir la leh ururka Al-Qaacida ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerar lagu dilay seddex askari oo u dhashay dalka Faransiis oo Isniintii ka dhacay dalka Mali.
Faransiiska ayaa hoggaaminayay ciidamada xulafada galbeedka Afrika iyo kuwa reer Yurub ee ka dhanka ah mintidiinta islaamiga ahi ee gobolkaasi galbeedka Afrika.
Haseyeeshe wadamada sida Niger iyo Mali ayaa waxaa saameeyay rabshadaha ku saleysan qowmiyadaha, tahriibinta dadka, falal burcadnimo iyo ka ganacsiga daroogada.
Dowladda ayaa warbaahinta Faransiiska ee RFI u xaqiijisay warka ku saabsan weerarradan ugu dambeeyay ee lagu qaaday labani tuulo ee ku yaal dalka Niger.
Wasiirka arrimaha gudaha Alkache Alhada ayaa sheegay in ciidamo loo diray deegaannadaasi si ay ammaanka u sugaan balse ma sheegin inta uu dhanyahay khasaaraha ka dhashay weerarradaasi.
Gobolka Tillaberi ee ay ku yaalliin tuulooyinkaasi la beegsaday ayaa tan iyo sanadkii 2017 ku jiray xaalad deg deg ah, waxaana guud ahaan dalka Niger aad ugu badan weerarrada kooxaha jihaad doonka ahi.
Bishii la soo dhaafay ayaa kooxda jihaad doonka ahi ee dalka Nigeria ee Boko Xaraam waxay gobolka Diffa ee ku yaal koonfur-bari Niger ku dishay ugu yaraan 27 qof.
Weerarradan ugu dambeeyay ayaa sidoo kale waxay ku soo beegmayaan iyadoo ay dalka ka jirto doorasho isla markaana madaxweyne Mahamadou Issoufou uu xilka ka degayo kaddib markii uu dhameystay labadiisa muddo xilleed oo min shan sano ah.
Previous articleSomaliland: Shaqo abuur loo sameeyay 25 qoys
Next articleXukuumadda Somaliland oo 70.000 Kun Oo Dollar Ku Bixisay Baraha Bulshada